amathiphu yokuhlanza - Ningbo BestCleaner Co., Ltd
BVC Acashile ingakusiza ubambe ephathini BBQ ngaphandle wesabe imisebenzi ahlanzekile.
Wena nabangani abaningi futhi ufuna ukubamangaza, kungani abamangali ngokuba usokhay party BBQ? Ungavumeli endlini yakho zingcolile uthole endleleni ejabulela isikhathi sakho nge abangane abahle. Nasi 5 step plan ukukusiza ukuhlanza indlu yakho - akukho ukucindezeleka, nje okulula sifinyelele imisebenzi. Ngakho kuphi ukuqala? Ukuze uthole party BBQ, izivakashi uzobe kokuchitha isikhathi sabo esiningi ngaphandle, ngakho ezindaweni ezibaluleke kakhulu ukuhlanza endlini kuthiwa emnyango, igumbi, ikhishi kanye yokugezela ophilayo. Asikho isidingo ukuhlanza yonke indlu kodwa kunalokho bagxile endleleni party - ukunakwa kakhulu abantu kuyoba kumathebula, emashalofini nezindawo ukusetha iziphuzo zabo.
1. Fresh & Declutter efulethini yakho.
Ngaphambi kokuba uqale, ukuvula amafasitela ezimbalwa ukuba baveze aphume endlini yakho ngakho-ke inuka fresh futhi ihlanzekile. Ukukhanyisa ikhandlela olunephunga elimnandi noma sishaye isikhala sakho nge deodoriser unezela eminye iphunga bese ubeka kwemizwelo. Okulandelayo sekuyisikhathi ngenela yiziphi izindawo endleleni inhlangano benesandla eziminyene. Ukuthola izindawo zesikhashana ukubeka zonke izinto ezingadingekile efana ubhasikidi ilondolo noma ibhokisi ukugcina lezi kuze umcimbi usuphelile engcono izixazululo elula.
2. Hlanza Gate yakho Umnyango futhi yokungena
Into yokuqala izivakashi zakho uzobona kuyinto emnyango wakho ngakho kubalulekile ukuzenza bahle kuqala. Yenza shanela okusheshayo ngaphandle, ukususa noma ikuphi ukungcola. Khona-ke wenza indlela yakho ngaphakathi ukwenza shanela emhlabeni yokungena ihholo yakho, ukusula noma iyiphi imfuhlumfuhlu futhi ngokubeka izicathulo, jackets, nezigqoko bese imeyli lisabonakala. Uthuli amathebula noma imihlobiso bese fafaza ezinye deodoriser.
3. Prepping Room Ukuphila
Qala by ngiphakamisa iyiphi endaweni izinto, eqondisa emasofeni, ezihlalweni, imicamelo kanye refolding Ufaka (olukhulu bafihle iyiphi amabala - Nokho ngeke kudingeke ukuba wenze lokhu ngemva usebenzisa le mikhiqizo BVC). Okulandelayo ukuhlanza etafuleni, isikrini se-TV amakhabethe nokunye ngomuthi enothuli ngokusebenzisa ngendwangu wangaphandle. Ekugcineni, ushanela isiphi uthuli noma isilwane izinwele phansi, futhi ungakhohlwa ukuhlanza skirting amabhodi yakho usebenzisa cleaner yakho ibhulashi noma hose okunamathiselwe.
iphuzu lokuqala kuhlasela ukuqala ukusula echibini kwakho kwanoma iyiphi izitsha ezingcolile; . Uma une Umshini wokuwasha izitsha eqinisweni epha them a hashaza niwabeke e Yibe usunikeza echibini yokuhlanza ezinhle - ke kufanele kube nelingenabala, anombala ocwazimulayo umcengezi uma usuqedile - vacuum BVC ngokuqinisekile uyokwenzela lo msebenzi lula kakhulu! Okulandelayo ukuhlanza esiphikisayo yakho eziqongweni, ukupakisha kude zikagesi ezingadingekile futhi Sula counter phansi ekhishini spray nendwangu wangaphandle noma usula zalutho. Ungenza okufanayo kwesitofu, amakhabethe efrijini. Kungase futhi kube umqondo omuhle ukuba bahlanze efrijini enu angaphakathi, rearranging indawo ukuba benze kanjalo appetisers, iziphuzo kanye nezinye okukhona. Ekugcineni, umusi ukolobhe ukuqinisekisa ekhishini lakho spick ne-span.
5.Last kodwa hhayi kakhulu into lihlanzekile igumbi Sanctuary
Besuka ekamelweni ebaluleke kakhulu yokugcina - yokugezela kuyinto egumbini kufanele unake kakhulu ingqondo. Manje lokhu akusho kufanele uthole phansi izandla namadolo akho kanye khuhla phansi, kodwa kunalokho, ukuhlanza izinto izivakashi kakhulu izosebenzisa like ethoyilethi, isibuko, ukucwila futhi esiphikisayo. Qala ngokuzinikeza isikhathi ukupakisha kude bonke usule izinto ehlangeni ku amakhabethe noma kuphi ebusweni, balandela ngokunikeza echibini, usule futhi isibuko yokuhlanza kuhle wezindlu zonke izinjongo noma BVC Acashile. Okulandelayo ukuhlanza indlu yangasese yakho - ngaphakathi, esihlalweni, usebe nengaphandle, futhi uqinisekise ukuthi esikhundleni yangasese roll yakho ekhona nge eyodwa fresh. Engeza amanye deodoriser noma ikhandlela olunephunga elimnandi ukudala ukuthi umuzwa spa. Futhi ungakhohlwa ukubeka entsha, fresh futhi Fluffy amathawula isandla aphume. Ekugcineni, nika yokugezela phansi a umusi ukubhuqa ezinhle futhi Usuqedile.
It Kulula njengo ukuthi nge 5 step plan yethu - ungavumeli yokuhlanza endleleni party PrEP isikhathi sakho.